Wasiirada Ganacsiga iyo Shaqada oo kulan soo dhaweyn ah loogu sameeyay Dalka Kuwait “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Safaaradda Soomaaliya ee Kuwait oo uu hoggaaminayo Danjire Cabdulqaadir Amiin Sheekh ayaa kulan sharafeed soo dhaweyn iyo xog-isweydarsi la yeeshay Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Mudane Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan iyo Wasiirka Shaqada iyo arrimaha bulshada Mudane Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muudeey, iyadoo kulanka ay goob joog ka ahaayeen Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kuwait.
Danjiraha Soomaaliya ee Kuwait Mudane Cabdulqaadir Amiin Sheekh ayaa ugu horeyntii warbixin kooban kasiiyay Wasiiradda xaaladda-guud ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee Kuwait ku nool, Isaga oo isla markaana xusay in kulankan ay safaaraddu u sameysay si ay Jaaliyadda fursad ugu helaan in ay la kulmaan Madaxda Qaranka ee Kuwait soo gaaray.
Wasiiradda ayaa dhankooda si faahfaahsan uga hadlay waxqabadka Dowladda iyo himilooyinka Xukuumadda ee dhinacyada Amniga iyo soo nooleynta dhaqaalaha, iyadoo Wasiirka Shaqada iyo Bulshada Mudane Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muudey uu ka warbixiyay dadaallada Wasaaraddu ee dhinaca Sharciga Shaqaalaha ajnabiga ah, iyo walaaca ay dowladdu ka qabto tirada ajaanibta dalka uga shaqeeya sida aan sharciga aheyn, waxa uuna xusay in Golaha Wasiiradda ay haatan hortaalo Hindise Sharciyeed ay Wasaaradda Shaqada soo diyaarisay, kaas oo looga hortagayo tirada sii kordheysa ee Ajaanibta loo qaadanayo shaqooyinka ay dadkeenu qaban karan, dhinacna kaabi doonta Amniga.
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Mudane Cabdiraxman Cabdi Cusman ayaa dhankiisa ka warbixiyay howlaha baaxadda weyn ee ay Xukuumaddu wado ee lagu soo celinayo xasiloonida dalka iyo haybaddii dowladnimo. gaar ahan waxa uu Jaaliyadda uga waramay Sharciga Maalgashiga dalka oo ay hadda gacanta ku hayso Wasaaradda, dhawaana soo bixi doona, isaga oo ugu baaqay Jaaliyadaha dibaddu in ay gacan ka geystan soo jiidashada maalgashiga shisheeye.
Wasiiradda ayaa sidoo kale su’aalo la xiriiro Amniga iyo Maamulka uga jawaabay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kuwait, iyaga oo u dardaarmay in ay isku dubnaadan, isna gacansiiyan, isla markaana ay ka qeyb qaataan dib u dhiska dalka.